ကားများအတွက်တယ်လီစကုပ်နှင်းရေမှုတ်များ - တရုတ် Richina
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: H250
ဦးခေါင်းအရွယ်အစား: * 285mm 250
extension အလျား: 800mm
တိုးချဲ့ နှင်းရေမှုတ်များ ကား
အဆင်ပြေပြေနဲ့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဆီးနှင်းဂေါ်ပြားသင့်ကားရဲ့ပင်စည်အတွက်အလွယ်တကူသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်, အလငျးအလေးချိန်, ကြံ့ခိုင်ဂေါ်ပြားတစ်ဦးတယ်လီစကုပ်လက်ကိုင်လွယ်ကူအဆင်ပြေချုပ်ကိုင်လက်ကိုင်ရှိပါတယ်
တပ် ချ. အရေးပေါ် ကားနှင်းရေမှုတ်များ
အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော, အိမ်မှာ, လမ်းပေါ်တွင်စခန်းချနေထိုင်မည့်နှင့်ပိုပြီး
extension အရှည် 800mm, ပြိုကျအရှည် 660mm
PP ဓါးအရွယ်အစား, 250 * 285mm
အလူမီနီဘဲဥပုံလက်ကိုင် anodized2အပိုင်းပိုင်း Telescoping
စံပြ Compact ရှာဖွေနေ ပြိုကျနှင်းရေမှုတ်များ အော်တိုထုတ်လုပ်သူ & ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနည်း ငါတို့သည်သင်တို့ဖန်တီးမှုအတွက်အကူအညီရရန်အကြီးအစျေးနှုန်းများမှာကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးရှိသည်။ လူအားလုံးတို့သည်တယ်လီစကုပ်မော်တော်ကားနှင်းရေမှုတ်များရဲ့အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိပါသည်။ ကျနော်တို့တယ်လီစကုပ်လက်ကိုင်နှင့်အတူနှင်းရေမှုတ်များတိုးချဲ့၏တရုတ်မူလအစစက်ရုံဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။
ကလေးများပလတ်စတစ်နှင်း Pusher ရေမှုတ်များ
လူမီနီယမ်လက်ကိုင်နှင့်အတူ 16 လက်မအရွယ်လူမီနီယမ်နှင်းရေမှုတ်များ